पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा सडक दुर्घटना: एकै परिवारका १३ सहित १९ को मृत्यु
इस्लामावाद । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा सडक दुर्घटना भएको छ । गाजीघाट नजिकै सार्वजनिक सवारी बस एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकै परिवारका १३ सहित १९ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । उक्त दुर्घटनामा घाइतेको स...
चीन र रुस विरुद्ध पारमाणविक अस्त्र बनाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिका, चीन र रुस विरुद्ध आक्रमक बनेको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुस र चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न पारमाणविक अस्त्र भण्डार विस्तार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम...
मस्को । अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले मस्कोसँग केहि कठिन प्रश्नको सामना गर्नु पर्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऐतिहासिक परमाणु हतियार सन्धीबाट बाहिर निश्कने प्रतिक्रिया दिएसँगै र...
ताइवान । ताइवानमा आइतबार भएको रेल दुर्घटनामा परी कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको ताइवानी अधिकारीले जनाएका छन् । ताइवानको उत्तरपूर्वी यिलान काउन्टीमा गुडिरहेको रेलले लिकलाई छोड्दा भएको उक्त घटनामा कम्त...
पत्रकार खसोग्जीको हत्या गरेको साउदी सरकारद्धारा स्वीकार
एजेन्सी । साउदी अरेबियाले पत्रकार जमाल खसोग्जीको हत्या भएको स्वीरका गरेको छ । त्यसका लागि छाडा एजेन्टहरू जिम्मेवार भएको उसले बताएको छ । साउदी विदेशमन्त्री आदिल अल-जुबैरले त्यो 'भयङ्कर भूल' भएको फक्स...
चुनाव विथोल्न १६६ ठाउँमा विस्फोट १३३ हताहत
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा कडा सुरक्षाका बिच चुनाव भइरहेको छ । शनिबार भएको संसद्को तल्लो सदन अर्थात् ‘बोलेसी जिर्गा निर्वाचनका १६६ ठाउँमा विस्फोट भएको छ । १३३ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । शनिबार भएको नि...
संसदीय निर्वाचन एक साताका लागि स्थगीत
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सरकारले दक्षिणी कन्दाहार प्रान्तमा भएको गोलावारीमा एक जना स्थानीय प्रमुखको मृत्यु भएपछि शनिबारको लागि तय गरिएको संसदीय चुनाव एक साताका लागि स्थगित गरेको छ । सो घटनामा जेनेर...
चीनले आफ्नो आकाशमा एक कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने तयारी थालेको छ। यश चन्द्रमालाई सन् २०२० मा सिचुवान प्रान्तको चेङ्दुमा जमिनबाट ८० किलोमिटर माथि आकाशमा स्थापित गरिने भएको छ। उचाइ कम हुने भएकोले यो कृत्रिम...
काठमाडौं । पाकिस्तानमा बलात्कारपछि एक बालिकाको हत्या गरिएको घटनामा दोषी पाइएका एक जनालाई फाँसी दिइएको छ। गत जनवरीमा बलात्कार गरी ६ वर्षीया बालिका जैनब अन्सारीको हत्या गरिएको थियो। हत्या गरी फालिएकी ज...
काठमाडौं । समुन्द्रमाथि बनेको संसारकै सबैभन्दा लामो पुल नेपालीले बनाएका छन् । हङकङ–मकाउ–चुहाई जोड्ने विश्वको सबैभन्दा लामो सामुद्रिक पुलमा नेपाली कामदार पनि संलग्न थिए । त्यो पुल २३ अक्टोबरदेखि सञ्चाल...
अफगानिस्तानको चुनावी र्‍यालीमा बम विस्फोट मृतकको संङ्ख्या २२ पुग्यो
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको चुनावी र्‍यालीमा बम विस्फोट भएको छ । बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २२ पुगेको छ । २० अक्टोवरमा हुने निर्वाचन र्‍याली लक्षित गरि बम विस्फोट भएको हो । अफगान अधिकारीले...
सुसी मार्टिनको अनौठो शैली
एजेन्सी । मौसम विशेषज्ञ सुसी मार्टिनले आफ्नो दुई बर्षीय छोरालाई ढाडमा बोकेर मौसमको जानकारी दिएकी छिन् । लाइभ टिभिमा छोरालाई ढाडमा बोक्दै मौसमको जानाकारी दिएकी सुसीले इन्टरनेशनल बेबिवयरिङ वीकलाई सम्मा...
‘मी-टु’ अभियानको खिल्ली उडाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्प
पेन्सीलभेनीया । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यौन उत्पीडनको खिलाप चलिरहेको ‘मी- टु’ अभियानको खिल्ली उडाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले पेन्सीलभेनीयाकोे मध्यावधी निर्बाचनको एक भव्य र्यालीलाई सम्बोध...
तुफान माइकेल- रेर्कड ब्रेक ‘नरक’ तुफान अमेरिकामा
अमेरिका । करिब दुई सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको माइकेल तुफानले फ्लोरिडामा ताडण्व मच्याएको छ । तुफानको कारण सडक छेउछाउमा रहेका रुख लड्न पुग्दा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने,घाईतेको संख्य...
टर्की प्रहरीको आरोप: खशोगगीको मृत्यु साउदी दुतावासमा
टर्की । टर्कीको स्तानबुलमा रहेको साउदी वाणिज्य दुतावासबाट गत मंगलबार गायब पारिएका साउदी अरवका पत्रकार जमाल खशोगगी हत्या भएको छ । स्तानबुल स्थित एक अधिकारीले रोयर्टस समाचार एजेन्सीलाई बताए अनुसार, ट...
अमेरिका । ब्रेट कावानाहले अमेरिकाको सुप्रिमकोर्टको न्यायाधीशमा सपथ लिएका छन् । ५३ वर्षीय कावानाहको नियुक्तिको पक्षमा ५० मत परेको थियो भने विपक्षमा ४८ मत परेको थियो । गत शनिबार अमेरीकी सुप्रिमकोर्टका ...
आईएनजीओहरुलाई ६० दिनभित्र देश छाड्न आदेश
काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले देशभित्र काम गरिरहेका अन्तर्राट्रिय संगठन (आइएनजीओ)हरुलाई ६० दिनभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ । पाकिस्तानले एनजीओहरुलाई आफ्नो काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । पाकिस्ता...
किन बन्दैछ एस ४०० मिसाईलमा अमेरिकाको टाउको दुखाई ?
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनबीच शुक्रबार भएको सम्झौता पछि एस ४०० मिसाईल किन अमेरिकाको टाउको दुखाई बन्दैछ ? जानिराखौं यसका दश विशेषताहरु १) एस ४०० मिसाई...
रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारतमा
काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन दुई दिवसीय भारत यात्रामा छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने वार्षीक द्धिपक्षीय शिखर बैठकका लागि राष्ट्रपति पुटिन बिहिबार भारत पुगेका हुन् । भारत यात्र...
अमेरिकी समर्थन विना साउदी राजा नटिक्ने !
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मंगलबार मिसिसीपीको एउटा र्यालीमा भने, साउदी राजा अमेरिकी समर्थन विना दुई हप्ता टिक्दैनन् । अमेरिकी सेना तपाईको रक्षा गर्नेछ । अमेरिकाको समर्थन विना रा...